शेयरबजार, जुवाघर र लगानी सुरक्षा | गृहपृष्ठ
Home लगानी शेयरबजार, जुवाघर र लगानी सुरक्षा
on: १३ भाद्र २०७५, बुधबार १०:५१ लगानी
शेयरबजार, जुवाघर र लगानी सुरक्षा
म त आजकल शेयर बजारतिर लागेको छु नि…।
शेयर खेल्दा पनि फाइदा हुने रैछ ।
फलानो शेयर खेल्दा बिग्रिएछ…।
यस्ता वाक्य हाम्रो जनमानसमा धेरैले बोल्ने बोली भएको छ । माथिका वाक्यले शेयरबजारमा लगानी गर्नु लगानी नभएर जुवामा लगानी गरेजस्तो बुझिन्छ ।
धेरै सर्वसाधारण जसले नबुझी शेयरमा लगानी गर्छन् । उनीहरू लहडमा नाफा गर्ने तथा मूर्खतामा गुमाउने गर्छन् । यस्तै समूह बब्लिङ मार्केटमा फस्नेसमेत हुन्छ । तर, नेपालको शेयरबजारमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले यस्तै समूह ठूलो आकारको छ । यस्तो समूहलाई लगानीको शिक्षा दिने जिम्मेवारी कस्को ?
विडम्बना ! सरकारका योजना तथा कार्यान्वयन गर्ने कतिपय पदाधिकारीले नै बोल्ने र तर्क गर्ने भाषासमेत यस्तै कुरालाई अनुमोदन गर्ने खालका हुन्छन् ।
कतिपयले त शेयरबजारलाई बेग्लै क्षेत्र बनाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरक व्यवहार गरेको पाइन्छ । जस्तै : उत्पादक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, होटल क्षेत्र, शेयरबजार क्षेत्र आदि ।
तर, यी सबै क्षेत्रलाई सङ्गठित तथा पारदर्शी बनाउँदै शेयरबजारमा सम्मिलित गराउन नसक्नु कसको असमर्थता हो ?
यी सबै क्षेत्रलाई शेयरबजारमा सम्मिलित गराउन सके मात्र हाम्रो शेयरबजार पनि अर्थतन्त्रको ऐनामा परिणत हुन सक्नेछ । अन्यथा अर्थतन्त्रको गति एकातिर र शेयरबजारको परिसूचिक अर्कैतिर हुने खतराले निरन्तरता पाउनेछ ।
‘नहुनुभन्दा कानो मामा निको’ भनेझैं नेपालमा शेयरबजार त छ । यद्यपि झण्डै २५ वर्षको अनुभव बटुलेको शेयरबजारको अस्थित्व हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धिका रूपमा मात्रै रहेको छ ।
देशको आर्थिक व्यवस्थाको मेरूदण्ड बैङ्किङ प्रणाली सबै शेयरबजारमा परावर्तित भएका छन् । वित्तीय प्रणालीको अर्काे क्षेत्रबीमा कम्पनीसमेत शेयरबजारमा परावर्तित भएको छ । यीबाहेक जलविद्युत् कम्पनी, होटल तथा अन्य उत्पादन एवम् सेवाक्षेत्र पनि शेयरबजारमा छन् । तर पनि शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना हुनुको सट्टा बेलाबेलामा उपेक्षाको शिकार हुन्छ ।
झण्डैै साढे २ दशकको यात्रामा नेपालको शेयरबजार पूँजीकरणमा बैङ्क, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको अंश ८० दशमलव ६ प्रतिशत, जलविद्युत् क्षेत्रको अंश ४ दशमलव ६ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र २ दशमलव ९ प्रतिशत, होटल क्षेत्रको १ दशमललव ६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाहरूको शून्य दशमलव १ प्रतिशत र अन्यको १० दशमलव २ प्रतिशत रहको छ ।
समष्टिमा नेपाली शेयरबजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एवम् बीमा कम्पनी क्षेत्रको अंश ठूलो रहेको छ । यसै क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको बढी आकर्षण देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाहेकका स्वायत्त नियामक निकायहरू उपलब्ध यी क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम रहेकाले पनि नाफा दिने गरेको तथा नाफा थोरै भए पनि लगानी सुरक्षित हुने भएकाले यो क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको बढी आकर्षण भएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समिति रहेको छ । यसले कम्पनीमा संस्थागत सुशासन कायम गराई लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने अवस्था सृजना गराउन सफल भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, जलविद्युत् पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्दै आएको अर्काे क्षेत्र हो । नेपालमा ऊर्जाको आवश्यकता बढी भएको र आउने दिनमा आवश्यकता अझै बढ्ने र उत्पादित ऊर्जा निर्यात पनि गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाहेक यस क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् विकास विभाग छ । यद्यपि यसले पनि संस्थागत सुशासन गराउने कुरामा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । विद्युत् नियमन आयोग झण्डै निष्क्रिय जस्तै छ ।
यीबाहेक अन्य क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डबाहेक अन्य नियामक निकाय छैनन् । यसकारण संस्थागत सुशासनको अभावमा लगानीकर्ताको लगानी जोखीममा पर्ने डरले अन्य क्षेत्रको लगानीप्रति आकर्षण नभएको हो । केही कम्पनी, जस्तै नेपाल युनिलिभर आफै संस्थागत नियमन गरी लगानीकर्तालाई फाइदा दिएको छ । यद्यपि बजारमा उपलब्ध यस कम्पनीको शेयर निकै कम छ । यसकारण यस कम्पनीप्रति लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् । नेपाल टेलिकमजस्ता ठूला कम्पनी (नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण) प्रति पनि आकर्षण रहेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आव २०७५।७६ को बजेट भाषणमा शेयरबजारमा सूचीकृत हुन केही आकर्षक प्रावधान अघि सारेका छन् ।
१ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका सबै कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकृत हुनैपर्ने प्रावधान र ५० करोडभन्दा माथिका कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकृत भएमा ३ वर्षका लागि छूटको आकर्षक इन्सेनिटभ प्रदान गर्ने योजना स्वागतयोग्य छ ।
यसैअनुरूप केही ठूला कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकृत हुने कुरा पनि आएको छ । तर, विगतबाट पनि केही सिक्नुपर्छ ।
ज्योति स्पिनिङ मिल, एस लेबोरेटोरिज तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रका केही कम्पनी विगतमा पनि सूचीकृत भए । तर, सर्वसाधारण लगानीकर्ताप्रति यी कम्पनीका व्यवस्थापकले न्याय गरेनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारबाही स्वरूप यी कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्‍यो । अन्त्यमा सूचीकरण खारेज गरियो । सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्कामा परे ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाहेकका अन्य कुनै पनि नियामक निकाय नभएकाले पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखीममा पर्‍यो । यी कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीको चरम दुरुपयोग गरे, जसले उत्पादनमूलक क्षेत्रप्रति लगानीकर्तामा वितृष्णा उत्पन्न भयो ।
अबका दिनमा पनि शेयरबजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीलाई सुशासनका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कभैंm नेपाल सरकारकै कुनै एउटा निकायलाई नियामक तोकी संस्थागत सुशासन कायम गर्न लगाई आवश्यक कारबाही भएमा नेपालको शेयरबजार पनि खेल्ने नभई लगानी गर्ने बजार हुने थियो ।
सूचीकृत कम्पनी र क्षेत्रगत विवरणको अवस्था
बैङ्क वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको सङ्ख्या १ सय ४७
उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग १८
ऊर्जा कम्पनी १८
व्यापारिक कम्पनी ४
अन्य कम्पनी ४
चुक्ता मूल्यको वार्षिक विन्दुगत आधारमा वृद्धि २२ दशमलव ६ प्रतिशत (जेठ मसान्तमा) रकम ३ खर्ब ४७ अर्ब ५ करोड रहेको छ ।
१ वर्षमा कति शेयर सूचीकरण भयो ?
साधारण शेयर ३० अर्ब ३ करोड
हकप्रद शेयर ३३ अर्ब ३५ करोड
बोनस शेयर २६ अर्ब ४५ करोड
सरकारी ऋण पत्र १२ अर्ब ६२ करोड